Myanmar Popular Singer Jenny's Beautiful Fashion | Myanmar Singer and Vocalist Photos
Myanmar Popular Singer Jenny's Beautiful Fashion
Myanmar popular model and singer, Jenny said that she got very happy moment during Thingyan Festival at Mandalay, the second city of Myanmar. " There were many Thingyan Stages and many audiences at everywhere in Mandalay. Therefore, I really love it", Jenny said.
Jenny is Myanmar popular hip-hop fearing singer and model girl. Jenny is from " Witch" girl singer group. She is also acting for some Karaoke Music Videos. Jenny also received many award from Myanmar Traditional Dance Competition. Jenny said if she getagood chance andagood place for acting, she is willing to do asaactress in future.
Myanmar sexy girl, Myanmar popular singer and model, Jenny
Myanmar cute girl, Myanmar model and singer, Jenny
အဆိုတော် နှင့် မော်ဒယ်မလေး ဂျင်းနီ ပါ။ သူ့နာမည်အရင်းက''ဟန်နွေငြိမ်း'' ပါ။ ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း(ရင်တွင်းဖြစ်) ရိုက်ကူးတဲ့ ''အမေဆိုတာ တစ်ခါတုန်းက သမီးပါပဲ'' မှာလည်း ကလေးသရုပ်ဆောင် ဝင်လုပ်ဖူးပါတယ်။ ဆိုကရေးတီး ပြိုင်ပွဲတွေ မှာလည်း မြန်မာအကနဲ့ ဆုတံဆိပ်တွေ အများကြီး ချိတ်ခဲ့သေးတယ်။ Hip Hop နယ်ပယ်မှာ သူ (Featuring) တွေ ဝင်ဆိုတော့လည်း အောင်မြင်ပြန်ရော။ သူ့အဆိုတော် နာမည်ကကျတော့ Jenny သူ့အဖွဲ့နာမည် Witch ။ သရုပ်ဆောင် အလုပ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဂျင်းနီ က “အရမ်းကြီး ဝါသနာပါတာ မျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေးတွေမှာ VCD သရုပ်ဆောင် အနေနဲ့တော့ ရှိတယ်။ အနုပညာရှင် ဆိုတာကတော့ ငါ ဟိုဟာမလုပ် ဘူး၊ ဒီဟာ မလုပ်ဘူး ဆိုပြီး အဲလို ငြင်းလို့တော့လည်း မရဘူး ပေါ့နော်။ အခွင့်အရေးရမယ်၊ ကိုယ်လည်း လုပ်ကွက်ရှိမယ် ဆိုရင်တော့ လုပ်ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်” လို့ပြောပါတယ်။
loveMay 25, 2009 at 11:43 PMJenny.....I like your music and your style.Try continue.....OKReplyDeletesmileJuly 21, 2009 at 1:23 AMမမရဲ့စတိုင်ကမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မျက်လုံးမလှဘူးနော်........ReplyDeleteAnonymousNovember 23, 2009 at 5:57 PMShe doesn't evenagood voice and barely hard to hit the right notes..haha..hilarious..ReplyDeleteMinlatheinJuly 5, 2010 at 5:53 AMဂျင်းနီ အိတ်ယူပြီးထွက်ပြေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ReplyDeleteTDSJanuary 18, 2012 at 9:01 PMall are nice!ReplyDeletefangyaotingOctober 14, 2016 at 10:05 PMfangyanting20161015michael kors outlet onlineuggs outlettory burch shoesugg bootsray ban sunglassesmichael kors outlet storeoakley sunglassesreplica watchescoach outlet clearanceReplyDeletecaiyanApril 1, 2017 at 6:31 AMcoach outlet onlinenike free 4.0 flyknityankees jerseyspolo ralph laurenmlb jerseyslongchamp bagadidas trainerscheap nfl jerseyscoach outlet storecoach outlet store online0401shizhongReplyDeleteAdd commentLoad more...